HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Abkazianina Abui Acholi Afrikaans Aja Akha Alemà Altaï Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Ateso Attié Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boulou Bété Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Dayak Ngaju Douala Drehu Dusun Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fon Frantsay Futuna (Atsinanana) Ga Galoà Gitonga Gokana Goun Grika Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guéré Haoussa Herero Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisii Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kpelle Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Guyane Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kreôla any Seychelles Krio Kurde Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Lambya Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathe Mazahua Mbunda Mende Meru Mizo Mongol Mooré Myama Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Ngabere Ngangela Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Odia Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Pendjabi (Shahmukhi) Pidgin (Afrika Andrefana) Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Serbia) Rômania (Slovakia Atsinanana) Samoanina Sangir Sango Sena Sepedi Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Talian Tamoul Tandroy Tankarana Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Myama Tenin’ny Tanana Népali Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Umbundu Urhobo Uruund Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wichi Wolaita Yacouba Zandé Zoloa Éwé
1. Iza no mahafantatra ny hoavy?
ZAVATRA ratsy be foana matetika no resahin’ny vaovao. Efa nieritreritra ve ianao hoe: ‘Hanao ahoana re ny hiafaran’ity fiainana ity e?’ Misy mihevitra fa efa tena akaiky ny fara andro matoa hoatr’izao ny fiainana. Izany tokoa ve no izy? Marina fa tsy misy olona mahafantatra an’izay hitranga amin’ny hoavy. I Jehovah anefa mahafantatra, ary resahiny ao amin’ny Baiboly izany.—Isaia 46:10; Jakoba 4:14.
2, 3. Inona no nanontanian’ny mpianatr’i Jesosy, ary ahoana no navalin’i Jesosy?
2 Inona no tian’ny Baiboly holazaina rehefa miresaka momba ny fara andro, na ny faran’izao tontolo izao izy? Tsy hoe ny tany no ho potika fa ny zava-dratsy rehetra no tsy hisy intsony. Nilaza i Jesosy fa hanjaka amin’ny tany manontolo ny Fanjakan’Andriamanitra. (Lioka 4:43) Tian’ny mpianany ho fantatra hoe rahoviana no ho tonga io Fanjakana io, ka hoy izy ireo: “Rahoviana no hitranga izany, ary inona no ho famantarana ny fanatrehanao sy ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity?” (Matio 24:3) Tsy niteny daty i Jesosy fa nanome famantarana, izany hoe nolazainy ny zavatra hitranga aloha kelin’ny faran’izao tontolo izao. Efa mitranga daholo izao ireny famantarana ireny.
3 Ho hitantsika ato amin’ity toko ity ny porofo fa efa tena akaiky ny farany. Hojerentsika aloha hoe nisy ady tany an-danitra. Ho azontsika, amin’izay, hoe nahoana no miharatsy be ny fiainana etỳ an-tany.
ADY TANY AN-DANITRA
4, 5. a) Inona no nitranga tany an-danitra, rehefa lasa Mpanjaka i Jesosy? b) Inona no lazain’ny Apokalypsy 12:12 hoe hitranga etỳ an-tany rehefa noroahina hanketỳ i Satana?
4 Nianarantsika tao amin’ny Toko faha-8 fa lasa Mpanjaka tany an-danitra i Jesosy tamin’ny taona 1914. (Daniela 7:13, 14) Izao no tantarain’ny Baiboly: “Nisy ady nipoaka tany an-danitra: I Mikaela [izany hoe i Jesosy] sy ny anjeliny niady tamin’ilay dragona [izany hoe i Satana]. Ary niady koa ilay dragona sy ny anjeliny.” * Resy i Satana sy ny demoniany ary natsipy tetỳ an-tany. Faly erỳ ny anjely any an-danitra! Ary ny olona etỳ an-tany? Milaza ny Baiboly fa hanomboka hikorontana ny fiainan’izy ireo. Romotra be mantsy ny Devoly “satria fantany fa fohy ny fotoana ananany.”—Apokalypsy 12:7, 9, 12.
5 Ataon’ny Devoly daholo izay azony atao mba hampikorontana ny fiainantsika. Tezitra be izy satria kely sisa dia tsy havelan’i Jehovah hanao na inona na inona etỳ an-tany. Andao hojerentsika izay nolazain’i Jesosy fa hitranga amin’ny andro farany.—Jereo ny Fanamarihana 24.
6, 7. Inona ny porofo fa tanteraka amin’izao fotoana izao ny tenin’i Jesosy momba ny ady sy ny mosary?
6 Ady. Hoy i Jesosy: “Hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hamely fanjakana.” (Matio 24:7) Be dia be mihitsy, tato ho ato, ny isan’ny olona maty amin’ny ady, raha oharina amin’ny taloha. Milaza ny Fikambanana Mpandinika An’izao Tontolo Izao fa olona 100 tapitrisa mahery no maty noho ny ady, nanomboka tamin’ny 1914. Raha atambatra ny isan’ny olona maty tamin’ny ady teo anelanelan’ny taona 1900 sy 2000, dia betsaka lavitra noho ny isan’ny maty tamin’ny ady talohan’ny taona 1900. Olona an-tapitrisany tokoa no mijaly vokatry ny ady!
7 Mosary. Hoy i Jesosy: “Hisy mosary.” (Matio 24:7) Amin’izao no be dia be ny sakafo eran-tany, nefa mbola betsaka ihany no tsy ampy sakafo. Tsy manam-bola hividianana sakafo sy tany hambolena mantsy ny olona. Olona arivo tapitrisa mahery no mahantra be, ka vola faran’izay kely no ivelomany isan’andro. Milaza ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana fa tsy ampy sakafo no tena mahafaty an’ireo ankizy an-tapitrisany maty isan-taona.
8, 9. Tanteraka ve ilay tenin’i Jesosy hoe hisy horohoron-tany sy aretina? Hazavao.
8 Horohoron-tany. Hoy i Jesosy: “Hisy horohoron-tany lehibe.” (Lioka 21:11) Mety hisy horohoron-tany mahery be foana izao isan-taona. Olona roa tapitrisa mahery no efa matin’ny horohoron-tany, nanomboka tamin’ny taona 1900. Efa mora kokoa izao ny mamantatra mialoha hoe hisy horohoron-tany, nefa mbola betsaka ihany no maty.
9 Aretina. Nilaza i Jesosy fa hisy “areti-mandringana”, izany hoe hisy aretina be dia be mora mifindra sady mamono olona maro. (Lioka 21:11) Mbola misy aretina tsy azo sitranina ihany izao, nefa efa nianatra nitsabo aretina be dia be ny dokotera. Hazavain’ny tatitra iray aza fa olona an-tapitrisany isan-taona no matin’ny tioberkilaozy, tazomoka, kôlerà, ary aretina hafa. Mbola nahita aretina vaovao 30 koa ny dokotera, ary tsy misy fanafodiny ny sasany.
NY TOETRAN’NY OLONA AMIN’NY ANDRO FARANY
10. Mitovy amin’ny lazain’ny 2 Timoty 3:1-5 ve ny toetran’ny olona izao?
10 Hoy ny 2 Timoty 3:1-5: “Amin’ny andro farany, dia hisy fotoan-tsarotra tsy mora setraina.” Nolazain’ny apostoly Paoly avy eo ny toetran’ny olona amin’ny andro farany. Nilaza izy fa ny olona
ho tia tena
ho tia vola
tsy hankatò ray aman-dreny
hivadika amin’ny teniny
tsy ho tia ny fianakaviany
tsy hahafehy tena
te hampifalifaly tena fa tsy ho tia an’Andriamanitra
mody tia an’Andriamanitra nefa tsy mankatò azy
11. Hatao ahoana ny ratsy fanahy, araka ny Salamo 92:7?
11 Hoatr’izany ve ny olona any aminareo? Betsaka no hoatr’izany eran-tany. Tsy ho ela anefa Andriamanitra dia hanatanteraka an’ity teniny ity: “Rehefa mitsiry tahaka ny ahitra ny ratsy fanahy, ary miroborobo ny mpanao ratsy rehetra, dia midika izany fa ho ringana mandrakizay izy ireo.”—Salamo 92:7.
ZAVATRA TSARA AMIN’NY ANDRO FARANY
12, 13. Inona no ampahafantarin’i Jehovah antsika mandritra ny andro farany?
12 Efa nilaza ny Baiboly fa hijaly be ny olona amin’ny andro farany. Lazainy ao koa anefa fa hisy zavatra tsara hitranga.
“Hotorina maneran-tany ity vaovao tsaran’ilay fanjakana ity.”—Matio 24:14
13 Lasa mazava izay lazain’ny Baiboly. Hoy i Daniela mpaminany, momba ny andro farany: “Hitombo be ny tena fahalalana.” (Daniela 12:4) Nataon’i Jehovah mazava kokoa amin’ny vahoakany ny Baiboly, indrindra fa nanomboka tamin’ny 1914. Nampahafantariny antsika, ohatra, ny marina momba ny anarany, ny fikasany, ny vidim-panavotana, ny maty, ary ny fitsanganan’ny maty. Lasa fantatsika fa ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no afaka mandamina ny olana rehetra mahazo antsika. Nianarantsika koa hoe inona no hatao raha te ho sambatra, na te hampifaly an’Andriamanitra. Inona anefa no ataon’ny mpanompon’Andriamanitra rehefa fantany daholo izany? Efa nolazain’ny Baiboly mialoha koa izany.—Jereo ny Fanamarihana 21 sy 25.
14. Aiza no itoriana ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana, ary iza no manao an’izany?
14 Hisy fitoriana eran-tany. Nilaza i Jesosy fa “hotorina maneran-tany ity vaovao tsaran’ilay fanjakana ity” amin’ny andro farany. (Matio 24:3, 14) Torina any amin’ny tany 230 mahery sy amin’ny fiteny 700 mahery izao io vaovao tsaran’ilay Fanjakana io. Vavolombelon’i Jehovah avy amin’ny “firenena sy foko” rehetra no manao an’izany eran-tany. (Apokalypsy 7:9) Ampianarin’izy ireo maimaim-poana ny olona mba hahafantatra momba an’io Fanjakana io sy izay hataony. Na betsaka aza no mankahala sy manenjika azy ireo, araka ny tenin’i Jesosy, dia mitory foana izy ireo.—Lioka 21:17.
15. a) Mino ve ianao fa andro farany izao? Nahoana? b) Ahoana no hiafaran’izay tsy mankatò an’i Jehovah? Ary izay mankatò azy?
15 Mino ve ianao fa andro farany izao? Betsaka ny faminanian’ny Baiboly momba ny andro farany efa tanteraka. Kely sisa dia hasain’i Jehovah hajanona ny fitoriana ny vaovao tsara, ary ho tonga “ny farany.” (Matio 24:14) Inona anefa ilay hoe farany? Ny Hara-magedona. Amin’izay Andriamanitra no hanafoana ny zava-dratsy rehetra. Haringan’i Jehovah izay tsy mety mankatò azy sy ny Zanany, ka i Jesosy sy ny anjeliny no hasainy hanao an’izany. (2 Tesalonianina 1:6-9) Tsy ho afaka hamitaka ny olona i Satana sy ny demoniany aorian’izay. Izay mankatò an’Andriamanitra sy ny Fanjakany kosa mbola ho eo, rehefa tanteraka ny zavatra nampanantenain’Andriamanitra.—Apokalypsy 20:1-3; 21:3-5.
16. Inona no tokony hataonao satria efa tena akaiky ny farany?
16 Efa kely sisa dia hifarana ny tontolon’i Satana. Tena tokony hieritreritra àry ianao hoe inona no tokony hataonao. Ataovy zava-dehibe aminao ny fianaranao, satria tian’i Jehovah hahalala zavatra betsaka ao amin’ny Baiboly ianao. (Jaona 17:3) Misy fivoriana ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah isan-kerinandro, mba hanampiana ny olona hahafantatra an’izay lazain’ny Baiboly. Mandehana foana àry mivory miaraka amin’izy ireo. (Vakio ny Hebreo 10:24, 25.) Aza misalasala fa ahitsio izay hitanao hoe tokony hahitsy. Vao mainka ho naman’i Jehovah ianao amin’izay.—Jakoba 4:8.
17. Nahoana no tsy hampoizin’ny olona ny hahatongavan’ny farany?
17 Nilaza ny apostoly Paoly fa ho avy “toy ny mpangalatra amin’ny alina” ny fotoana handringanana ny ratsy fanahy, izany hoe tsy hampoizin’ny olona. (1 Tesalonianina 5:2) Efa nilaza i Jesosy fa ho variana amin’ny fiainana ny olona ka tsy hiraharaha hoe andro farany izao. Hoy izy: “Toy ny andron’i Noa, dia ho toy izany koa ny fanatrehan’ny Zanak’olona [na ny andro farany]. Fa tamin’izany andro izany, fony mbola tsy tonga ny safodrano, dia nihinana sy nisotro, nampaka-bady sy navoaka hampakarina ny olona, mandra-pahatongan’ny andro nidiran’i Noa tao amin’ny sambofiara. Ary tsy niraharaha izy ireo mandra-pahatongan’ny safodrano, izay nifaoka azy rehetra. Dia ho toy izany koa ny fanatrehan’ny Zanak’olona.”—Matio 24:37-39.
18. Inona no nampitandreman’i Jesosy antsika?
18 Nampitandrina antsika i Jesosy mba tsy ho variana amin’ny “fihinanana tafahoatra sy ny fibobohan-toaka ary ny fanahiana eo amin’ny fiainana.” Nilaza mantsy izy fa ho tampoka be “toy ny fandrika” ny farany, ary “ho tonga amin’izay rehetra monina ambonin’ny tany manontolo.” Nampitandrina koa izy avy eo hoe: “Koa miambena hatrany, ary mitalahoa mandrakariva [na mivavaha mafy] mba ho afa-mandositra izany zava-drehetra tsy maintsy ho tonga izany ianareo, ka ho afaka hitsangana eo anatrehan’ny Zanak’olona.” (Lioka 21:34-36) Mila manaraka an’io tenin’i Jesosy io isika, satria kely sisa dia horinganina ny tontolon’i Satana. Izay olona ankasitrahan’i Jehovah sy Jesosy ihany no ho tafavoaka velona, ka hiaina mandrakizay ao amin’ny tontolo vaovao.—Jaona 3:16; 2 Petera 3:13.
^ feh. 4 Antsoina hoe Mikaela koa i Jesosy Kristy. Jereo ny Fanamarihana 23.
HEVITRA 1: LAZAIN’I JEHOVAH AMINTSIKA NY HOAVY
“Manambara hatrany am-piandohana izay hitranga amin’ny farany [i Jehovah], sy manambara hatry ny ela ny zavatra mbola tsy natao.”—Isaia 46:10
Inona no fantatsika momba ny andro farany?
Lasa Mpanjaka tany an-danitra i Jesosy, tamin’ny 1914.
Efa nilaza i Jesosy fa ho sarotra ny fiainana.
Vao lasa Mpanjaka i Jesosy dia noroahiny i Satana ary natsipiny tetỳ an-tany. Tezitra be i Satana satria kely sisa izy dia tsy havelan’i Jehovah hanao na inona na inona etỳ an-tany.
HEVITRA 2: EFA ANDRO FARANY IZAO
‘Inona no ho famantarana ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity?’—Matio 24:3
Inona ny faminanian’ny Baiboly efa tanteraka?
Mbola tsy nisy ady, mosary, horohoron-tany, ary aretina be dia be hoatr’izao mihitsy hatramin’izay.
Nilaza ny apostoly Paoly fa ho ratsy toetra ny olona amin’ny andro farany.
Amin’izao vao tena ataon’i Jehovah mazava amin’ny vahoakany ny Baiboly.
Torina eran-tany ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana.
HEVITRA 3: ATAOVY IZAY HAMPIFALIANA AN’I JEHOVAH
“Ho avy toy ny mpangalatra amin’ny alina ny andron’i Jehovah.”—1 Tesalonianina 5:2
Inona no tokony hataonao satria efa tena akaiky ny farany?
Ataovy zava-dehibe aminao ny fianarana Baiboly.
Mandehana mivory miaraka amin’ny Vavolombelon’i Jehovah, dia hahafantatra zavatra betsaka kokoa ianao.
Ahitsio izay hitanao fa tokony hahitsy. Vao mainka ho naman’i Jehovah ianao amin’izay.
Aza variana amin’ny zavatra hafa fa manompoa an’i Jehovah.
“Andro Farany” ve Izao Iainantsika Izao? (Fizarana 1)
“Andro Farany” ve Izao Iainantsika Izao? (Fizarana 2)